Global Voices teny Malagasy · 16 Novambra 2012
Tantara tamin'ny 16 Novambra 2012
Rosia16 Novambra 2012
Naneho hevitra momba ilay «Torohay ho an'ireo mpiasa mpila ravinahitra» nivoaka tany Rosia ny sampana natao ho an'ny tanora ao amin'ny antoko "Parti démocratique populaire" ao amin'ny fitondràna ao Tadjikistan. Kanefa, ny mpanoratra ity lahatsoratra ity dia mahita hoe mihevitra ny amin'ireo teratany tadjiks sy ny firenena niavian'ireny mpiasa mila...
Amerika Latina16 Novambra 2012
Ny Alatsinainy 29 Oktobra 2012 dia niharan'ny fanafihan'olona efatra nisaron-tava sy fandoroana fananan'olona ireo Boliviana mpanao gazety, Fernando Vidal sy ny teknisian'ny fampielezam-peo Karen Arce avy amin'ny Radio Popular ao Yacuiba. Ny tsoa-kevitra voalohany dia manondro fa mety misy ifandraisany amin'ny ampamoaka fanakianana ny resaka kolikoly sy varo-maizina nataon'i Vidal...
Mahafeno Ny Fepetra Maha-Mpikambana Ao Amin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'Olombelona Ve i Etiopia?
Etiopia dia isan'ireo firenena Afrikana voafidy ho mpikambana tao amin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'Olombelona tamin'ny 12 Novambra 2012. Eo ampahitàna ny zava-bita mampalahelo momba ny zon'olombelona tany Etiopia, betsaka ireo Etiopiana no mahatsapa fa tsy mendrika ny firenen-dry zareo ny hipetraka ho mpikambana ao amin'ilay filankevitra. Mpikirakira...
Eoropa Andrefana16 Novambra 2012
Nitondra indray mandeha indray ny vahoaka ho eny an-dalambe nanerana ny firenena ilay fitokonana faobe tao Portiogaly ny 14 Novambra 2012, hijoroany hanohitra ny fisongan'ny politikam-pitsitsiana. Ny tena hery manosika ny vahoaka hanao fihetsiketsehana na izany aza, dia tsy takatr'ireo fampahalalam-baovao mahazatra loatra noho ny fisian'ireo hetsika mahonena "mahasarika kokoa...
Zava-mitranga toa somary manaraby ihany, fa dia mitady hitory ireo mpiasa izay noroahin'ny tompon'orinasa efa ho enina amby folo taona lasa izay, ny Vaomieran'ny raharahan'ny mpiasa (CLA) ao Taiwan, ity farany izay misahana amin'ny fiarovana ny zon'ny mpiasa. Mitady vola amin'ny fitoriana an'i Mpanao lalàna Yuan any amin'ny fitsarana ity vaomiera itya noho...
Maika Hihaona Momba an'i Gaza Amin'ny Ahoana ny Ligy Arabo?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana16 Novambra 2012
Nandefa fampiantsoana ny Filan-kevi-piarovana ao amin'ny Firenena Mikamba ary nanatontosa fivoriana maika tamin'ny Alarobia alina teo mba hiresaka momba ny fanafihana an'habakabaka niseho farany teo tao Gaza, sy ny vokadratsin'ny fanafihana tifitra balafomanga nataon'ny Hamas tao Israely. Nilaza kosa ny Ligy Arabo tetsy andaniny fa hihaona izy ireo amin'ny Asabotsy...
Nahomby ny Fitokonan'ny Mpiasan'ny Metro tao Kairo
Tafaverina indray ny metro ao Ejipta – taorian'ny fitokonana naharitra efatra ora. Tao amin'ny sampan-draharahan-damasinina, izay afaka mitondra olona 2 tapitrisa isan'andro manerana an'i Kairo, niato tamin'ny asany ireo saoferan-dalamby noho ny hetsi-panoherana ny filohan'ny filankevi-pitatanana ny metro, izay voampanga ho nanao kolikoly. Nitaky karama tsaratsara sy fepetra mendrika momba ny asa...
Naneho Hevitra Momba Ny Fahalanian'i Barack Obama Ho Filoham-pirenena Amerikana Indray i India
Azia Atsimo16 Novambra 2012
Niteraka hafaliana sy fanehoan-kevitra tao India ny valim-pifidianana filoham-pirenena Amerikana. Teo anivon'ny governemanta, niarahaba ny filoham-pirenena Amerikana Barack ny Praiminisitra Manmohan Singh ary toy izany ihany koa i Sonia Gandhi, filohan'ny Antoko Kongresy Nasionaly Indiana. Saingy manao ahoana kosa ary ny fihetseham-pon'ireo mponina ao India – inona no mba nolazainy? Shibayan Raha ao amin'ny...
Tsy natory i Gaza nandritra ny alina satria nanohy nanafika ny Palestiniana i Isiraely. Nanomboka ny toe-draharaha raha nifampitifitra i Isiraely sy Gaza – izay mbola mitohy hatramin'izao – rehefa matin'i Isiraely nandritra ny fanafihana an'habakabaka an'i Gaza ny mpitarika ara-miaramilan'ny Hamas antsoina hoe Ahmed Al-Jabari [afak'omaly]. Araka ny tatitra...